ကမ္ဘာ ပတ်​ချင်​​နေတဲ့စိတ်​ကို စာဖတ်​ခြင်းနဲ့ စတင်​လိုက်​ပါ – Focus Myanmar
ကမ္ဘာ ပတ်​ချင်​​နေတဲ့စိတ်​ကို စာဖတ်​ခြင်းနဲ့ စတင်​လိုက်​ပါ
!ခွေးတစ်ကောင်ဟာ မီးခဲကိုနင်းမိရင် ဂိန်! ဂိန် ဂိန်အော်ပြီး ထွက်ပြေးသွားတာပဲ ဒါပဲ။နောက်တစ်ကောင်ကထပ်နင်းမိလည်း ဂိန်! ဂိန် ဂိန်အော်ပြီး ထွက်ပြေးသွားတာပဲ။သူနင်းမိလို့ပူတဲ့ကိစ္စကို တစ်ခြားခွေးတွေကို မနင်းမိစေနဲ့ ပူတယ်လို့်မပြောနိုင်ဘူး။သူ့အတွေ့အကြုံကို လက်ဆင့်မကမ်းနိုင်ဘူး။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ သူတို့မှာ ဘာသာစကားမရှိလို့။ကိုယ်တို်င်ဖြစ်မှ ကိုယ်တိုင်သိရတာ ကမ္ဘာဦးအစခွေးတွေကနေ ဒီနေ့ခွေးတွေအထိ ဂိန်! ပဲ။
ကျွန်တော် တို့ လူတွေမှာတော့ အဲ့ဒီလိုမဟုတ်ဘူး။ဘာသာစကားရှိတယ်။ကျွန်တော် တို့ငယ်ငယ်ကတည်းက တစ်ပါးသူရဲ့အတွေ့အကြုံလက်ဆင့်ကမ်းလာတာ။အမေဖြစ်သူက အဲ့ဒါမကိုင်နဲ့ ပူပူ၊အဲ့ဒါမကိုင်နဲ့ ဝေါ့ဝေါ့၊မင်းကိုင်ပါဦးမလား?မင်းအမေရဲ့အတွေ့အကြုံလက်ဆင့်ကမ်းမှုကြောင့် မင်း မီးကို အပူမှန်းသိသွားတယ်။ဝေါ့ဝေါ့ဆိုတာကို ရွံစရာမှန်းသိသွားတယ်။
အောက်ဆီဂျင်ကို ခုချက်ခြင်း မင်းဓာတ်ခွဲခန်းထဲမှာ မင်းရှာဖွေထုတ်နိုင်တယ်။အဲ့ဒီအောက်ဆီဂျင်ကိုမင်းရှာတွေ့ခဲ့တာမဟုတ်ဘူး။ဒါပေမယ့် ရှာတွေ့ခဲ့တဲ့ပညာရှင်က လက်ဆင့်ကမ်းခဲ့လို့ မင်းချက်ခြင်းဖော်ထုတ်နိုင်တယ်။ဒါအတွေ့အကြုံကိုလက်ဆင့်ကမ်းတာပဲ။
ပညာသင်တယ် ပညာရှာတယ်ဆိုတာ ဒါပဲလေ။ဘာသာစကားရှိလို့ တစ်ပါးသူရဲ့အတွေအကြုံကို လက်ဆင့်ကမ်းနိုင်တယ်။တစ်ဆင့်ပြီးတစ်ဆင့်လက်ဆင့်ကမ်းကြတယ်။ ဒါကြောင့်လည်း လူ့လောကကြီးက တစ်ဆင့်ပြီးတစ်ဆင့် တိုးတက်ပြောင်းလဲလာတာပေါ့။အတွေးအကြံ အတွေ့အကြုံကို လက်ဆင့်ကမ်းတဲ့နေရာမှာ နှစ်မျိူးရှိတယ်ဗျ။တစ်ခုက တိုက်ရိုက်ပြောဆိုပို့ချခြင်းနဲ့ နောက်တစ်ခုက သူ့ရဲ့အတွေ့အကြုံတွေကို စာအုပ်ထဲမှာ ချရေးထားခဲ့ပြီး လက်ဆင့်ကမ်းခဲ့တာ။
ဥပမာ- အောင်မြင်သူတွေရဲ့ အထုပ္ပတ္တိတွေကို ဖတ်ကြည့်ရင် သူတို့ရဲ့အတွေးအကြံ အတွေ့အကြုံတွေ မင်းရလာမယ်။မင်းစိတ်ဓာတ်တွေမာကျောလာမယ်။အထပ်တလဲလဲ ကြိုးစားချင်စိတ်တွေ ဖြစ်လာမယ်။အောင်မြင်သူတွေလည်း အခက်အခဲတွေကြားက ရုန်းထကြတာကိုး။ဒါမို့ စာဖတ်ခိုင်းတာ စာဖတ်တဲ့နေရာမှာလည်း နည်းနည်းဖတ်မိတောင် များများတွေးပါ။လိုက်နာပါ၊ ကျင့်သုံးပါ။သူတစ်ပါးရဲ့အတွေ့အကြုံကို ကိုယ့်ရဲ့အတွေးအကြံလေးနဲ့ပေါင်းစပ်ပါ။ကိုယ့်ကိုကိုယ်ခိုင်း ၊ ကိုယ့်ကိုကိုယ်မခိုင်းရင် သူများခိုင်းတာခံရတတ်တယ်။
စဉ်းစားတွေးတောပေးရတယ်။ဦးနှောက်ကိုခါးတောင်းကျိူက်ပါ။ဒါမှ ခေါင်းဆောင်ဖြစ်မှာ လူခါးတောင်းကျိူက်ရင် ကူလီပဲဖြစ်မှာပေါ့။စာဖတ်ခြင်းကို ပေါ့သေးသေးမတွက်နဲ့ ။ စာဖတ်တယ်ဆိုတာ တစ်ပါးသူရဲ့အမှားကို ကိုယ်ဆက်မမှားအောင်လုပ်တာ။တစ်ပါးသူရဲ့အတွေ့အကြုံကို ကိုယ့်အတွေ့အကြုံအဖြစ်ရယူတာပဲ။လူလိမ္မာတို့သည် တစ်ပါးသူ၏ အမှားမှ သင်ခန်းစာကို ယူတတ်ကြတယ်။လူမိုက်တို့သည် ကိုယ်တိုင်မှားမှ သင်ခန်းစာရကြတယ်။ပို၍ မိုက်မဲသောသူတို့ကား ကိုယ်တိုင် မှားပါလျက် နှင့်ပင် သင်ခန်းစာ မယူတတ်ကြကုန်တဲ့။
စာကြည့်တိုက်တစ်တိုက်ဖွင့်ရင် အချူပ်ထောင်မှာ လူငါးယောက်လျော့မယ်။ စာဖတ်တဲ့လူဟာ အသိအဉာဏ်အားကောင်းလာတယ်။အနည်းဆုံး မိဘတွေ ဆုံးမရတာသက်သာတယ်။မင်းကိုမင်းချစ်ရင် ပညာသင်ပါ စာဖတ်ပါ။မင်းမိသားစုကို မင်းချစ်ရင် ပညာသင်ပါ စာဖတ်ပါ။မင်းတိုင်းပြည်ကို မင်းချစ်ရင် ပညာသင်ပါ စာဖတ်ပါ။မင်းတို့တစ်တွေ ဗဟုသုတကိုရှာဖွေပါလေ့လာပါဆည်းပူးပါ ၊ စာဖတ်ပါ။
Recommended for you-ပစ္စုပ္ပန်မှာ လုပ်သင့်တာကို လုပ်ရင် အနာဂတ်က မင်းကို တာဝန်ယူသွားလိမ့်မယ် ။တစ်ပါးသူရဲ့အတွေ့အကြုံကို လက်ဆင့်ကမ်းယူကြပါ။ဘဝကို ဦးနှောက်ကဦးဆောင်တာဖြစ်တဲ့အတွက် ဦးနောက်ကိုဦးစားပေးတဲ့စာမျိူး များများဖတ်စေချင်ပါတယ်နော်…။
စိတ်ဖိစီးမှုတွေကို ဖယ်ရှားပေးမယ့် နည်းလမ်းလေးများ
ချမ်းသာအောင် အချိန်တိုင်းကြိုးစားနေပေမယ့် ဘာလို့မချမ်းသာသေးတာလဲ?
ရသ / သတင်း
ယာဉ်ကြောစောင့်ကြည့်ရေး ကင်မရာရှေ့ ကိုယ်ဟန်လာပြသည့် စင်ရော်နှစ်ကောင် ရေပန်းစား
အသက် ၃၀ မတိုင်ခင် သင်ယူသင့်တဲ့ ဘဝသင်ခန်းစာများ
အလုပ် များလွန်းလို့ စာ မဖတ်နိုင်ဘူး တဲ့လား ?